နောက်ကို ပြန်ဆုတ် ခွာ လို့ မရတဲ့ ဆုံမှတ် တခုကိုရောက်နှင့် နေပြီး US နဲ့ China ( သို့မဟုတ် ) ဧကန် ဖြစ့်မယ် စစ်ပွဲ (ပင်လယ်ထဲမှာ ရေငံရေချို​ပြောင်း တဲ့စက် နဲ့ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား အတွက် l စစ်သည် တော်တွေ စားစရိတ် နဲ့တင် တနေ့ ကို US $ သန်း 100 ကျော် ကုန်နေတဲ့ US ) – Let Pan Daily
US နဲ့ China ဆိုတာနောက်ကို ပြန်ဆုတ်ခွာ လို့ မရတဲ့ ဆုံမှတ် တခု( point of no return )ကိုရောက် နေတာပါ အခြေခံ ဗီဇ စိတ်တွေ မတူတဲ့ အရှေ့ နဲ့ အနောက် (သို့ )လက်ဝဲ နဲ့ လက်ျာ တို့ ရဲ့ ဝါဒရေးရာ ပဋိပက္ခ မဟုတ်ပါဘူးဧကန် စစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ
Fort Ternate, Philippines (Feb. 23, 2004) – Amphibious Assault Vehicles (AAV) arrive on the Philippine shore from the amphibious transport dock ship USS Fort McHenry (LSD 43). Close to 300 Marines and Sailors arrived at Fort Ternante, Philippines in order to participate in exercise Balikatan 2004 at Subic Bay, Philippines. Balikatan 2004 isaregularly scheduled exercise that will improve interoperability, increase readiness and continue professional relationships between the U.S. Armed Forces and the Armed Forces of the Philippines. U.S. Marine Corps photo by Cpl. Daniel Yarnall. (RELEASED)
ဘာကြောင့်ဆိုကောင်းဘွိုင်တွေက မာလ်ဘိုရို တောင်ကြားလွင်ပြင်က မြင်း ကြီး တွေကိုမစီးပဲအင်မတန် လှပ ခန့်ညား တဲ့အန္တရာယ် အပေးနိုင်ဆုံးသင်္ဘောကြီး တွေ ကိုစီးပြီးChina ကို ကင်းလှည့် ကင်းထောက် လုပ်နေကြလို့ပါ
ကောင်းဘွိုင် ကြီးဟာဒီအတွက်တနေ့ကို ကုန်ကျ စရိတ် SCS နေရာ ကွက် ကွက် ကလေးမှာတင် US $ သန်း 300 ကျော်လောက်နေ့စဉ် ကုန်ကျနေမှာပါSCSဂျပန်က အိုကီနာဝါဖိလစ်ပိုင် က ဆူးဘစ်ထိုင်ဝမ် ကျွန်းမလက္ကာ ပင်လယ် ပြင်သူ့ရဲ့ စစ်သည်တော် တွေစားသောက် စရိတ်နဲ့စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ် တွေ အပြင်
ဖိလစ်ပိုင် base မှာ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပြင်ဆင်နေရတာလေယာဉ် ပြေးလမ်း က အစအကုန်ပြန်လုပ်နေရတုန်းလက်နက်တိုက် နဲ့ စစ်သည်တန်းလျားတွေ လုပ်နေတုန်းUS ရဲ့ ကမ္ဘာ အနှံ အပြားစစ်အခြေစိုက် စခန်းတွေနဲ့လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်စုတွေ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ရေငံရေချို​ပြောင်း တဲ့စက် နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အတွက် l စစ်သည် တော်တွေ စားစရိတ် နဲ့တင် တနေ့ ကို US $ သန်း 100 ကျော် ကုန်ကျပါတယ်
ဘာကြောင့် ကြာနေတာလည်းဆိုရင် ရှောရှော ရူရူ မဖြစ်သေး လို့ နေမှာ ပေါ့ ဒါပေသိB52 လေယာဉ်ကြီးတွေ နဲ့B1B လေယာဉ်ကြီးတွေ ကတော့ စတင်စက်နှိုးပြီး အစပြုပျံသန်း နေကြပါပြီ
source : ဆက်_ထွန်း
နောကျကို ပွနျဆုတျ ခှာ လို့ မရတဲ့ ဆုံမှတျ တခုကိုရောကျနှငျ့ နပွေီး US နဲ့ China ( သို့မဟုတျ ) ဧကနျ ဖွဈ့မယျ စဈပှဲ (ပငျလယျထဲမှာ ရငေံရခြေို​ပွောငျး တဲ့စကျ နဲ့ လြှပျစဈ ဓာတျအား အတှကျ l စဈသညျ တျောတှေ စားစရိတျ နဲ့တငျ တနေ့ ကို US $ သနျး 100 ကြျော ကုနျနတေဲ့ US )
US နဲ့ China ဆိုတာနောကျကို ပွနျဆုတျခှာ လို့ မရတဲ့ ဆုံမှတျ တခု( point of no return )ကိုရောကျ နတောပါ အခွခေံ ဗီဇ စိတျတှေ မတူတဲ့ အရှေ့ နဲ့ အနောကျ (သို့ )လကျဝဲ နဲ့ လကျြာ တို့ ရဲ့ ဝါဒရေးရာ ပဋိပက်ခ မဟုတျပါဘူးဧကနျ စဈပှဲ ဖွဈလာမှာပါ
ဘာကွောငျ့ဆိုကောငျးဘှိုငျတှကေ မာလျဘိုရို တောငျကွားလှငျပွငျက မွငျး ကွီး တှကေိုမစီးပဲအငျမတနျ လှပ ခနျ့ညား တဲ့အန်တရာယျ အပေးနိုငျဆုံးသင်ျဘောကွီး တှေ ကိုစီးပွီးChina ကို ကငျးလှညျ့ ကငျးထောကျ လုပျနကွေလို့ပါ
ကောငျးဘှိုငျ ကွီးဟာဒီအတှကျတနကေို့ ကုနျကြ စရိတျ SCS နရော ကှကျ ကှကျ ကလေးမှာတငျ US $ သနျး 300 ကြျောလောကျနစေ့ဉျ ကုနျကနြမှောပါSCSဂပြနျက အိုကီနာဝါဖိလဈပိုငျ က ဆူးဘဈထိုငျဝမျ ကြှနျးမလက်ကာ ပငျလယျ ပွငျသူ့ရဲ့ စဈသညျတျော တှစေားသောကျ စရိတျနဲ့စကျသုံးဆီကုနျကစြရိတျ တှေ အပွငျ
ဖိလဈပိုငျ base မှာ အကွီးစားပွငျဆငျမှုတှပွေငျဆငျနရေတာလယောဉျ ပွေးလမျး က အစအကုနျပွနျလုပျနရေတုနျးလကျနကျတိုကျ နဲ့ စဈသညျတနျးလြားတှေ လုပျနတေုနျးUS ရဲ့ ကမ်ဘာ အနှံ အပွားစဈအခွစေိုကျ စခနျးတှနေဲ့လယောဉျတငျ သင်ျဘော အုပျစုတှေ ဘာမှ မလုပျပဲ ရငေံရခြေို​ပွောငျး တဲ့စကျ နဲ့ လြှပျစဈဓာတျအား အတှကျ l စဈသညျ တျောတှေ စားစရိတျ နဲ့တငျ တနေ့ ကို US $ သနျး 100 ကြျော ကုနျကပြါတယျ
ဘာကွောငျ့ ကွာနတောလညျးဆိုရငျ ရှောရှော ရူရူ မဖွဈသေး လို့ နမှော ပေါ့ ဒါပသေိB52 လယောဉျကွီးတှေ နဲ့B1B လယောဉျကွီးတှေ ကတော့ စတငျစကျနှိုးပွီး အစပွုပြံသနျး နကွေပါပွီ
source : ဆကျ_ထှနျး
မိဘအပေါ် သိတတ်နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဈေးရောင်းနေတာပါ ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်